Tag: social media kuronga | Martech Zone
Tag: social media kuronga
Maitiro Akanakisa Ekuronga Zvakakodzera zveMagariro Midhiya Zvinyorwa
Chipiri, May 15, 2018 China, Kukadzi 25, 2021 Nate Gadzhibalaev
Kuronga ako enhau midhiya kunofanirwa kuve chikamu chakakosha cheyako social media kushambadzira zano, uye pasina chikonzero kutaura, ine zvakawanda mabhenefiti. Kunze kwekusafanirwa kufunga nezve kutumira pane akati wandei midhiya mapuratifomu kakawanda pazuva, iwe zvakare uchengetedze isingachinjike purogiramu, kuronga nguva-inotaridzika zvemukati, uye uve nehutano kugovana-ratio sezvo uchigona kuronga zvisati zvaitika. Panzvimbo pekuve pane vezvenhau mapuratifomu nguva dzese zuva nezuva, kuronga
JARVEE: Windows-Yakavakirwa Social Media Automation Software.
Muvhuro, Ndira 15, 2018 Muvhuro, Ndira 15, 2018 Douglas Karr
JARVEE ipuratifomu inokwanisika inoshanda panzvimbo yeboka renhau rezvemagariro kuti ive nechokwadi chekubudirira kwechiratidzo chako chepamhepo nekukura, kutyaira traffic yakawanda, uye kutyaira kwakawanda kunotungamira kubhizinesi rako. Nekuti iri windows-based desktop software, haina zvakawanda zvekukanganisa kwemaAPIs ebasa uye echitatu-bato otomatiki mapuratifomu. Izwi rimwe chete reyambiro, iwe unogona kuita kumwe kukuvara kune kwako mukurumbira nekupamha masocial network nematurusi akadai. Zviri
Viraltag: Tsvaga, Ronga, Kuronga, Goverana uye Teedzera Mifananidzo Pamhepo
Chitatu, Nyamavhuvhu 26, 2015 NeChishanu, Nyamavhuvhu 28, 2015 Douglas Karr
Kushandisa mifananidzo zvinobudirira pamhepo kuchakura e-commerce yako yekutengesa, kushambadzira kwako kusvika, kana bhizinesi rako. Kana kambani yako iri kushanda mune inoonekwa ndima yekutora mifananidzo, chikafu, mafashoni kana kusimudzira chiitiko, iwe wave kutoshanda kuti ugovane zvinoonekwa zvemukati online. Zviratidzo zviri kutonga internet - kubva paFacebook feed yako kuenda kuPinterest. Zviratidzo zvakaratidzirwa kutyaira kudzvanya, kugovana, kunzwisisa uye shanduko. Dambudziko kumabhizinesi mazhinji mashandisiro ekushandisa zviwanikwa zvemufananidzo - kubva
Mugovera, Gunyana 13, 2014 Svondo, Gunyana 14, 2014 Douglas Karr
Ivo vanhu veBIGEYE, rekugadzira masevhisi agency, vaisa pamwechete iyi infographic kubatsira makambani mukugadzira rakabudirira rezvenhau kushambadzira zano. Ini ndinonyatsoda kuputsika kwematanho asi ini zvakare ndinonzwira tsitsi kuti makambani mazhinji haana zvese zviwanikwa zvekutora zvido zveruzivo rwehukama. Kudzoka pakuvaka vateereri munharaunda uye kutyaira zviyero zvinowoneka zvebhizinesi zvinowanzo kutora nguva yakareba kupfuura kushivirira kwevatungamiriri